Elokenz: Nenjere Dzosera Saiti Yako Yakanakisa Kuita Zvemukati paSocial Media | Martech Zone
Elokenz: Nenjere Dzosera Saiti Yako Yakanakisa Kuita Zvemukati paSocial Media
Vashambadzi vakasikwa vakasikwa uye ini ndinotenda dzimwe nguva zvakare iri bhizinesi ravo 'kuita kwekukuvadza. Icho chinhu icho chandinoramba ndichizviyeuchidza ndimene nezvangu zvinyorwa. Ini ndinogara ndichinyura zvakadzika uye zvakadzama muzvishandiso nemazano ... uye ndokanganwa kuti kune vashanyi vasina kunge vari parwendo urwu neni.
Kune makambani, uku kutarisa kukuru. Sezvo ivo vachiramba vachifunga uye nekuisa zvemukati, ivo vanokanganwa kuti kune vamwe vanhu vangangodaro vasingatomboziva nezve yavo chikuva kana izvo zvakanaka zvemukati izvo vangangodaro vakaburitsa mwedzi wapfuura, gore rapfuura, kana kunyange vakuru izvo zvinopa ruzivo rwavanoda.
Ichi chikonzero chakakosha nei tichisundira vatengi vedu kuti vashandise (uye isu tinokudziridza) a raibhurari yezvinyorwa pane yavo saiti. A zvemukati raibhurari zano rinovimbisa kuti rako rekushambadzira timu rinogara rakatarisa pamisoro, maindasitiri, matanho, uye manas evashanyi vese vanosvika pane yako saiti. Basa rako harisi rekuburitsa hova dzisingaperi dzechinyorwa chitsva… ndezvekuona kuti iwe une raibhurari yakazara yakagadziriswa uye yakagadziridzwa nekufamba kwenguva.
Kudzokorora kuSocial Media
Chimwe chinotarisirwa ndezvekudyidzana kwevanhu. Kutumira kune vezvenhau dzimwe nguva zvinoita kunge spammy ... asi zvakafanira nekuti muteveri wawakawana mumwedzi wapfuura anga asiri kuverenga nekudzvanya kusvika kune ako enhau midhiya ezvekupedzisira gore kana zvakadaro. Unofanirwa kubata zvemukati mezvenhau zvemukati seyakasungwa rwizi zvakare… kusimudzira raibhurari yako kune vateveri pamatanho ese murwendo rwavo (kwete yako).
Hazvisi izvo zviri nyore, zvakadaro. Kana iwe urikuvaka mutsetse uye nekuisa masocial updates kuti uwedzere kurova vateereri vako… zvinogona kutungamira ku kuneta munharaunda. Kuneta kwevanhu munharaunda kunogona kuita toni yekukuvadza kune chako chiratidzo nekutyaira kusiiwa uye kuve nevateveri vanokusiya nekuti ivo havaone kukosha mune zvakadzokororwa zvinyorwa zvauri kugadzira. Dzidzo dzakangwara dzakakosha - dzichiita kuti dzive nenguva asi kwete zvakanyanya ... kusanganisa zvinyorwa zvitsva uye zvinowanzo zorodza zvemukati zvekare kutyaira kubatikana.
Elokenz Smart Yemukati Kushambadzira Kugovera
Elokenz mutsara wakangwara, unozadza wega unoongorora zvemukati, unodzidza kuti ndezvipi zvirinani zvekugovana zvinoenderana nemaitiro evateereri vako, uye wosarudza kuti ndezvipi zvemukati zvekugovana zvinotevera pane yega yega nhepfenyuro yenhau.
Elokenz inoshanda nematanho mana akareruka:
Tumira chikamu chemukati - zvemukati zvinounzwa muElokenz uye zvinoratidzwa mune raibhurari yezvishandiso.
Sarudza magariro enhau - sarudza mapuratifomu zvinyorwa zvako zvichazotumwazve. Elokenz anotarisira yako yemukati kukwidziridzwa.
Gadzira akawanda mamiriro mamiriro - Elokenz inoita kuti iwe ugadzire misiyano yakawanda sezvaunoda papuratifomu. Chishandiso chinosarudza imwe vhezheni nguva dzese chinyorwa chako pachinotumwazve.
Ongorora kusvika kwako uye kugadzirisa zvirimo - chikuva chinopa simba vashambadziri kuti vaone mhando yezvinyorwa uye izvo zvivandudziro zvakashanda zvakanyanya kukwezva vashanyi vatsva uye kutyaira zvimwe zvinotungamira.
Ini ndinoda kushandisa chishandiso ichi - zviri nyore kuronga zvemagariro zvikamu neiyo Elokenz raibhurari yeRSS feeds yandakavaka. Ini ndinoda analytics yavo kuti ndikwanise kuona zviri kushanda pane yega yega masocial network. Iwe unogona kugadzirisa yega yega yemasheya ako nekukurumidza!
Lisa Sicard, Kufuridzira Kuti Ubudirire
Elokenz inokubatsira iwe kuchengetedza nguva pane ezvezuva nezuva zvemagariro enhau mabasa uye kusvika kune vakawanda vatengi nekushandisa yako zvemukati pazere kugona. Pasina kutaura kuti iwe urikuchawedzera kudzoka pane kudyara pachinyorwa chimwe nechimwe icho chinotyaira traffic uye zvinotungamira!
Tanga Yako Yemazuva makumi matatu Elokenz Trial
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa kana Elokenz.
Tags: nguva yakanakisa yekutumirakugovana zvemukatiraibhurari yezvinyorwaelokenzFacebookLinkedInrepostpurogiramu zvinyorwakuronga zvemukatikuronga magariro enhaukuneta munharaundaevanhu vezvenhaunzanga yemagariropasocial postTwitter